Molar faobe ny entona
Molar faobe fanaovana kajy
Calculator Molar faobe ny entona, online kajy - mamela ny kajy molar faobe ny entona avy amin'ny nomena boky, ny lanjany, ny hafanana sy ny tsindry mandatsa-dranomaso.
Safidio ny entona avy amin'ny lisitra na hiditra masontsivana
Mandatsa-dranomaso entona masontsivana
Argon (Ar) Azota (N2) Ethanol (C2H6O) Gazy (CO) Gazy karbonika (CO2) Hidrozenina (H2) Hélium (He) Metanina (CH4) Ny sodium hydroxide (NaOH) Ny sodium klôro (NaCl) Oksizenina (O2) Propane (C3H8) Rano (H2O) Rivotra Solifara karbonika (SO2)
goba centimeter goba metatra goba santimetatra toratelo feet
Faobe ny entona:
grama kilao ounces kilao
Rivotra iainana Pascal millimeters HG mm. rano tsanganana santimetatra Hg santimetatra ny rano tsanganana Antsasa-kilao isaky ny toradroa. Tongotra Antsasa-kilao isaky ny toradroa. Santimetatra
Kajy ny molar faobe ny rivotra
Molar faobe dia fananana ara-batana faritana ho toy ny faobe ny fananana nomena mizarazara noho ny habetsaky ny fananany, noho izany dia misy lanjany ny iray tana ny fananany. Molar faobe dia faritana avy amin'ny tsara indrindra lalàna entona (mira Mendeleev-Clapeyron):
izay - Entona fanerena, - Molar boky, - Faobe ny entona, - Molar bahoaka, - Rehetra izao mandatsa-dranomaso foana, - Tena mari-pana
Molarity fitanan'i rijan fanaovana kajy
Kajy molar fitanan'i, faobe ny iombonana amin'ny, boky sy ny raikipohy lanjan'ny simika vahaolana.
Tangential haingana rijan fanaovana kajy
Kajy tangential haingana ny zavatra mampihetsi-po amin'ny alalan'ny fanovàna ny velocity rehefa mandeha ny fotoana.